Wararka - 3 Lipsticks oo aad ugu habboon Xagaaga, Quruxdu Waa Ooyaysaa!
3 Lipsticks oo aad ugu habboon Xagaaga, Quruxdu waa Ooynaysaa!
Ka duwan dareenka "culus" ee dayrta iyo jiilaalka, xagaaga ayaa ku dhawaad ​​"nasasho leh" in la iska qaado, iyo qurxinta sidoo kale waa isbeddel iftiin iyo hufnaan.
Laakiin si kasta oo ay daahfurnaantu u tahay daahfurnaanta, adeegsiga lipstick -ka ayaa weli ah tallaabo aan laga maarmin dad badan.
Xilliga xagaaga, dadku waxay doorbidaan qaar ka mid ah “midabyo dhalaalaya oo firfircoon” midabada hodanka ah.
Markaa maanta waxaan ku siin doonaa Amway dhowr boqol oo yuunis ah oo ku habboon xagaaga.
Dadka dhabta ah ee leh midabyo kala duwan ayaa iyagana la isku habeeyay, hadda ~ waxaan idiin rajaynayaa dhammaan inaad beertaan farxad hhhhhhhh
Dooro Kuwaan Lipsticks -ka Xagaaga
Muraayad biyo dhalaal dhalaalaysa
Midabka berde waa midab aad loo jecel yahay labadii sano ee la soo dhaafay, dhalaalka midabka si gaar ah uma sarreeyo, ma jirto dareen fluorescence, aad bay ugu habboon tahay xagaaga!
Kani waa khasnad midab midab jaban leh. Jaakad khafiif ah oo leh qurxiyo cad iyo qurxiyo khafiif ah ayaa hagaajin kara muuqaalkaaga. Midabka cas ee jaakad qaro weyn ayaa noqon doonta mid cad. Waxa aan leeyahay waa dareen qabow oo qurux badan.
In kasta oo loogu yeero muraayadda biyaha dhalaalaya dhaldhalaalka dibnaha, dhab ahaantii dareenka muraayadda si gaar ah uma sarreeyo, wuxuu sameyn doonaa filim. Darajada huurka ayaa weli wanaagsan, mana jiri doonto codsi aan sinnayn marka la eego dhibaatooyinka yar yar sida khadadka qalalan iyo diirka.
Awoodda joogitaanka ayaa aad u fiican. Asal ahaan, waa la samayn karaa iyada oo aan lagu dhejin koobka, laakiin dhibaato caadi ah ayaa soo baxda, taas oo ah dibinta midabaynta. Aniga shakhsi ahaan dhowr jeer ayaan tijaabiyey. Waa run, ma fududa in la dejiyo. Deeq -bixiyeyaasha daneeya arrintan waa inay ka taxaddaraan beeritaanka geedo -geedka!
Wejiga Baipi, midkani waa mid aad u caqli iyo xarrago badan. Marka la soo koobo, ma khaldami kartid indhahaaga oo xiran.
Wajiga huruudda ah, in kasta oo aan kor loo qaadin sida wejiga cad, haddana dareenkan hoose iyo kan soo-jiidashada lehba waa mid aad u cajiib ah!
Faruuryaha dhibka leh ee geesinimada leh ee Heroine iyo dhabannada labada-isticmaal dhalaalaya
Iftiiminta faruuryuhu aad bay caan u tahay hadda, qiimuhu ma sarreeyo, midabka midabkiisu aad buu u qurux badan yahay, oo mar kasta oo midab cusub la sii daayo, anigoo raalli ka ah ayaan iska bixin karaa.
Digirta gaduudka cas waa midab cusub oo la sii daayay waqti ka hor. Waa midab dhejis digir ah oo aad u dhalaalaya oo leh midab yar oo ubax ah gudaha. Waxay noqon doontaa mid aad u cad marka si khafiif ah loo dahaadho, iyo midab cawlan ayaa noqon doona mid culus marka si weyn loo dahaadho. Waxaa jiri doona nooc afka ah. Dareenka ceeryaanta leh.
Sidii dhaldhalaalkii hore oo kale, qaab -dhismeedka dhaldhalaalka dibnaha ayaa aad u wanaagsan. Markaad afka saartid, waxaa jiri doona dareen qaylo-dhaan ah, oo khadadka dibinta ayaa si toos ah u jilicsanaan doona hal ilbidhiqsi gudahood.
Awoodda joogitaanku ma xuma, waxay koobaysaa waxoogaa koob, kaas oo ku jira baaxadda la aqbali karo.
Midabkani ma aha mid soo -jiidasho leh, in kasta oo ay ku jiraan waxoogaa qoraallo ubax ah, haddana waa mid aad u saaxiibtinimo leh maqaarka huruudda ah. Awoodda qarinta midabka sidoo kale aad bay u wanaagsan tahay, midabka midabka dibnaha laftiisu wax badan ma saameyn doonto.
Biyo khafiif ah oo dhalaalaya dibnaha dhalaalaya
Waxaan dhowr jeer oo hore ku talinay taxanahan riwaayadda gudaha ee taxanaha ah ee dibnaha, sida: dhoolla-caddeynta aan baruurta lahayn, raagista saddexda dhibcood, boodka caadiga ah iyo tirooyinka midabka kale, haddana waxaan inta badan ku xirtaa boorsada qurxinta.
Si aan runta u sheego, tirooyinka midabka ee taxanahani aad bay ugu fiican yihiin magacyada! Kani #PinkSleepwalk waa midab cusub oo loogu talagalay socodka hurdada maalintii. Waan jeclaa aragtida koowaad. Midabka casaanka shaaha ee abrikotku ma aha mid dagaal badan, oo ay weheliso dhalaal aad u hufan, waxay leedahay dhadhanka xagaaga!
Waxaan kugula talin lahaa dahaarka qaro weyn ama dahaarka midkan, maxaa yeelay haddii si khafiif ah loo dahaadhay, marka lagu daro in afka laga dhigo biyo, midabku wuxuu noqon karaa kelinimo.
Maqaalku wuxuu u yara eg yahay dhaldhalaalka dibnaha, laakiin ma aha mid dhegdheg leh. Ka dib markaad codsato, filim jilicsan ayaa la abuuri doonaa muddo ka dib, oo leh muraayad qurux badan oo u eg.
Laakiin waxaan u malaynayaa in ujeeddada loo adeegsado ay tahay in dib loo codsado, maxaa yeelay awoodda waarta ayaa ah mid guud, way fududahay in la dhaqaaqo, waxaana lagu soo koobi karaa qaddar yar iyo dhowr jeer, iyo jubbado qaro weyn ma yeeli doonaan dibnaha inay caajis noqdaan.
Midkani ma doorto midabka maqaarka, laakiin waxaa si fudud u saameeya midabka midabka dibnaha laftiisa.
Haddii midabka dibnaha laftiisu uu mugdi yahay, waxaa laga yaabaa inuu noqdo dhaldhalaal dibadeed oo hufan, u isticmaal uun si aad u daboosho xoogaa lipstick matte ah, oo iyaduna ah doorasho wanaagsan.
Waqtiga dhejinta: Jun-22-2021
indho -dejiye, dibinta, jeedal mink, Jeexa indhaha, Iibiyeyaasha Indhaha, Kordhinta Indhaha,